Otú E Si Akụziri Ụmụaka Gbasara Chineke | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Olee otú ụmụaka ga-esi mụta ịhụ Chineke n’anya?
Jiri ihe ndị Chineke kere nyere nwa gị aka ka ọ mata onye Chineke bụ ma hụ ya n’anya
Ụmụ gị ga-amụta ịhụ Chineke n’anya naanị ma ha hụ ihe gosiri na Chineke dị adị nakwa na ọ hụrụ ha n’anya. Ọ bụrụ na ha amata onye Chineke bụ, ha ga-ahụ ya n’anya. (1 Jọn 4:8) Dị ka ihe atụ, ụmụaka kwesịrị ịmata azịza ajụjụ ndị a: Olee ihe mere Chineke ji kee mmadụ? Gịnị mere Chineke ji hapụ ndị mmadụ ka ha na-ata ahụhụ? Olee ihe Chineke ga-emere ndị mmadụ n’ọdịnihu?—Gụọ Ndị Filipaị 1:9.
Otú ị ga-esi eme ka ụmụ gị bido ịhụ Chineke n’anya bụ na ị ga na-egosi ha na gịnwa hụrụ Chineke n’anya. Ọ bụrụ na ha achọpụta na ị hụrụ Chineke n’anya, ha ga-ebido ịhụ ya n’anya.—Gụọ Diuterọnọmi 6:5-7; Ilu 22:6.
Gịnị ka ị ga-eme ka ihe ị na-akụziri ụmụ gị ruo ha n’obi?
Okwu Chineke, bụ́ Baịbụl, na-akpa ike. (Ndị Hibru 4:12) N’ihi ya, nyere ụmụ gị aka ka ha mụta ihe Baịbụl na-akụzi. Mgbe Jizọs na-akụzi ihe n’ụwa, ọ jụrụ ndị ọ na-akụziri ihe ajụjụ, gee ha ntị ma kọwaara ha Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ ya mere ihe ọ gwara ha ji ruo ha n’obi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ị na-agwa ụmụ gị na-eru ha n’obi, na-akụziri ha ihe otú ahụ Jizọs si kụzie ihe.—Gụọ Luk 24:15-19, 27, 32.
Ihe ọzọ ga-enyere ụmụ gị aka ka ha mata onye Chineke bụ ma hụ ya n’anya bụ akụkọ dị iche iche dị na Baịbụl bụ́ ndị gosiri otú Chineke si mesoo ndị mmadụ ihe. Ị gaa na www.jw.org/ig, ị ga-ahụ akụkọ Baịbụl a na-egere egere, akwụkwọ, na vidio ndị ga-enyere ụmụ gị aka ka ha mata onye Chineke bụ ma hụ ya n’anya.—Gụọ 2 Timoti 3:16.
E nwere ike iji katuun ndị a, na abụ ndị a, nakwa ihe ndị e nwere ike ibipụta n’akwụkwọ kụziere ụmụaka otú ha ga-esi na-eme ihe dị Chineke mma.